FIFA 2012 - Reloaded ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Game » FIFA 2012 - Reloaded
By နေမင်းမောင်3:12 PM5 comments
FIFA GAME 2012 နောက်ထပ်တွေ့တာလေး ပြန်ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ဒီကောင်လေးကတော့ 6.5 Gb လောက်ရှိပါတယ်.. Update မို့လို့ထပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..အားလုံးပေါင်း 35 ပိုင်းရှိပါတယ်.. နက်ကောင်းတဲ့ သူတွေအတွက်ကတော့ အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်.. အရင်တစ်ခါက မရဲတစ်ရဲနဲ့တင်ပေး လိုက်တာ ယူတဲ့သူကယူ ကြတာတွေ့တော့ ဒီတစ်ခါတော့ ဒေါင်းလော့ချရတာ အဆင်ပြေအောင် နည်းလမ်းလေး ပါပြောပေးပါမယ်.. Password က အပိုင်း ( ၁၀ ) အပိုင်း ( ၂၀ ) နဲ့ အပိုင်း ( ၃၀ ) သုံးခုထဲခံထား တာပါ .. Mediafire Link ကိုရောက်ပြီဆိုရင် Please enter the password below to download this file ဆိုတဲ့ အနေနီကွက်ထဲမှာ ကျွန်တော် အောက်မှာပေးထားတဲ့ Password ကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ... ပြီးရင် Enter ခေါက်လိုက်ပါ.. ဒါဆိုရင် ဒေါင်းလော့ချလို့ရမဲ့ လင့်လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် .. ဖိုင်တွေအကုန်လုံးကို ဒေါင်းလော့ချပြီးပြီဆိုရင် အပိုင်း ( 1 ) ကနေစပြီး ဖြည်လိုက်ယုံပါပဲ .. ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်..
ဒါပေမယ့်...အပိုင်း နံပါတ် ၁၄ ..၂၉..၃၁..၃၃...
တို့မပါဘူးဗျ.. အခု အကိုတင်ထားတဲ့အတိုင်းဒေါင်းပြီး ဆော့လို့ရပြီးလားဗျ...
EX.HDD မှာ တင်ပြီးဆော့လို့ရပါသလားဗျာ..
ဘယ်လိုများလုပ်လို့ရပါသလဲဗျ....နောက်ပြီး ခွေမဘန်း ဘဲ ဒီအတိုင်း ဘယ်လိုရမ်းရပါသလဲ ခင်ဗျား..
crusekoole October 11, 2011 at 4:48 PM
ကျွန်တော်ဒေါင်းပြီးတော့file ကို extract လုပ်တော့ပြီးခါနီး မှာ file is broken ဖြစ်နေတယ်
အကိုရေ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၁၀၊ ၂၆ က service violation ဆိုတဲ့စာပဲပေါ်တယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး လမ်းညွှန်ပေး ပါအုံး။ ကျေးဇူးပဲနော်!!!